Jimco, Jun 19, 2020-Soomaaliya oo Kenya ugu hambalyeysay guusha kursiga Golaha ammaanka – LaacibOnline
Jimco, Jun 19, 2020-Soomaaliya oo Kenya ugu hambalyeysay guusha kursiga Golaha ammaanka
June 21, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Jimco, Juun 19, 2020 (HOL) – Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad ayaa waxa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ugu hambalyeeyay dowladda Kenya oo Jabuuti kaga guuleysatay kursiga aan joogtada aheyn Golaha Aammaanka Qaramada Midoobe.Waxa uuna sheegay inuu rajeynayo in Kenya ay si buuxdo u matali doonto arrimaha Gobolka geeska Afrika iyo qaddiyadaha la xiriira.
“Aniga oo ku hadlaya magaca dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba waxaan halkaan ugu hambalyeeynayaa jamhuuriyadda Kenya oo ku guuleysatay kursiga aan joogtada aheyn ee golaha ammaanka, anigoo hubo in Kenya ay arrimaha gobolka si fiican ugu matali doonto kursigaas Ayaan leeyahay Hambalyo” ayuu wasiir Cawad ku yiri qoraalkiisa.
Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka dhexeeya is-fahmi waa siyaasadeed, oo la xiriira arrimaha badda , taas oo keentay in labada dalba ay isku dhaliileen qoraallo diblumaasiyadeed oo ay horay usoo kala saareen.
← Somalia: Operation Atalanta ESPs Numancia Is Inspecting UN FAOs Fish Aggregating Devices to Boost Local Fisheries and Fight Underlying Causes of Piracy
China is promising to write off some loans to Africa. It may just be a drop in the ocean →
Arbaco, Jan 13, 2021-Akhriso Magacyada dadkii shacabka ahaa ee maanta lagu laayay gobolka Galgaduud
January 13, 2021 Abdirisaaq 0
Axad, Sept 27, 2020-Guddiga farsamadda soo xulista Barlamaanka labaad ee Hirshabelle oo maanta gaaray Magaalada jowhar
Isniin, Dec 14, 2020-Dad lagu tuhmayo weerarkii 9 -kii bishan lagu dilay saraakiisha oo la qabtay
December 14, 2020 Abdirisaaq 0